Diin iyo Dawlad: Kala saar ama isku hayn! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Intii dadku ay ahaayeen xoolaley ama beeraley waxay ahaayeen dad aan wax badani isugu jirin oo qof walba beertiisa ama xoolihiisa gooni u maamusho in kasta oo ay dadku sida qaalibka ah ay lahaayeen qarni kasta dad ay madax ka dhigtaan sida salaadiin, boqorro iwm ama xeerar ay ku kala baxaan, sidaa darteed ma jirin baahi keenaysa inay dadku samaystaan dastuur wax walba qeexaya ama in la isu geeyo wax kasta oo dadka ka dhexeeya si hal meel looga maamulo.
Laakiin markii dadka noloshiisii is bedeshey sida inay samaysmeen magaalooyin waawayn, wax barasho nadaamsan, warshado iwm waxaa timid baahi ah in nadaam loo sameeyo, nadaamkuna wuxuu daruuri ka dhigay in la helo xeerar ama shuruud lagu wada shaqeeyo si loo qaybsado wixi dhib iyo dheefa ee ka dhexeeya dadka wax isku darsaday.
Wixi ay dadku mulkiyaan oo dhan sida xoolo, awlaad, hawl, talo iwm wuxuu u qaybsamaaya wax qof gaar u leeyahay iyo wax la wadaago, wixii qof gaar u leeyahayna isaga ayaa masuul ka ah maamulkiisa iyo taladiisaba, nafcigiisuna isaga ayuu gaar u yahay, wixi la wadaagana taladiisa, hawshiisa iyo nafcigiisaba waa la wadaagaa.
Wixi shirko lagu noqdana 2qof bay ka bilawdaan sida laba is guursata ama la lacag is ku dartada sidaa darteed wax kasta oo la isku darsado waxaa xeer u ah wixi 2qof oo shirko ah u xeera, maxaa yeelay hadi dadku bato shuruuddu ma is bedelayso ee waxaa is bedelaya oo keliya tirada dadka shaqaynaya ama wax qaybsanaya iyo tayadooda xagga wax qabadka ama aqoonta, sidaa darteed wixi naadaama ee dawlad lagu dhiso wuxuu la xugun yahay kan lagu dhiso wixi maal ah ee dadku isku darsadaan sida xoolaha, lacagta iwm.
Dastuurka ama shuruudda ay dhiganayaanna waxay ku xiran tahay waxa la isku darsaday inta uu le’eg yahay, qaababka wax la isugu darsadana waxaa ka mida in wax walba la wadaago sida wax barashada, caafimaadka, maaliyadda iwm ama in waxna la wadaago waxna la kala lahaado sida nadaamka ku dhisan waxa loo yaqaan federaalka.
Sidaa darteed qaabka dawlad loogu dhaqmayo diinta way ku caddahay maxaa yeelay dawlad qaanuun baa lagu dhisaa, shuruudda qaanuunkuna quraanka way ku caddahay, qaanuunkuna isma bedelo ee waxaa is bedela nolosha dadka oo keliya sida inay baadiye ka tagaan oo magaalo degaan ama heelaan aqoon u fududaysa wax berigii hore ku adkaa sida isgaarsiinta, caafimaadka, farsamada iwm.
Sidaa darteed dawladdu inay ka madax bannaan tahay mu’asasaadka diiniga ah oo ay noqoto maamul dadka oo dhan u dhaxeeya oo aan cid la xulafoobin waa arin sax ah, laakiin in dawladda lagu dhiso qaanuun ka baxsan kan diinta sax ma’aha, maxaa yeelay qaanuunka quraanka ku yaal waa qaanuun caalami ah, kuna dhisan caddaalad iyo shuruud cad, laakiin cilladda jirta ayaa ah in wax badan oo aynu ku tirinno shareecada islaamka inay khilaafsan tahay quraanka.
Sidoo kale calmaaniyadda (qawaaniinta rayidka ah/الحكم المدني), ee dad badani ku riyoonayaan iyaguna waa iska qawaaniin gacan ku rimis ah oo wax qaldan iyo wax saxanba leh maxaa yeelay malaha nadaam cilmi ah oo loo raaco, sidaa darteed meesha keliya ee laga helayo qaanuun dhamaystiran oo shuruudiisa leh oo caalami ah waa kitaabka quraanka oo keliya.
Qoraa: Cabdalle M. Aw-xasan